Akukho kubeka phantsi impembelelo yeAmazon kwintengiso kunye neecommerce. Ungasathethi ke ngentshabalalo eyenzekileyo kwishishini lokuthengisa ngenxa yobhubhane kunye nesigqibo esalandelayo sokuvala uninzi lwabathengisi abancinci. Namhlanje, ngaphezulu kweepesenti ezingama-60 zabathengi baqala ukukhangela kwi-Intanethi kwiAmazon. Ingeniso yeAmazon evela kubathengisi bayo beentengiso inyuke ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 ngo-2020 xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. 2021 Uya kuzisa
NgoLwesibini, Matshi 16, 2021 NgoMvulo, Aprili 26, 2021 Douglas Karr
Ukusebenza okuphezulu kwamaqela okuthengisa asebenzisa ii-personas zabathengi, aqonde iihambo zokuthenga, kwaye abeke esweni ngokusondeleyo ii-funnel zabo zentengiso. Ndincedisa ukuhambisa isifundo soqeqesho kwimikhankaso yentengiso yedijithali kunye ne-personas yomthengi nenkampani yamazwe aphesheya ngoku kwaye umntu othile ucele ukucaciselwa kwaba bathathu ndicinga ukuba kufanelekile ukuxoxa. Ukujolisa kubani: Abantu abaThengayo ndibhalele kutshanje malunga nomthengi kunye nendlela ebaluleke ngayo kwimizamo yakho yokuthengisa yedijithali. Banceda icandelo kwaye bajolise kuwe